1 Samueri 13:1-23
13 Sauro akanga aine makore [?]* paakatanga kutonga,+ uye akatonga Israeri kwemakore maviri. 2 Sauro akasarudza varume zviuru zvitatu pavaIsraeri; uye zviuru zviviri zvakava naSauro kuMikmashi+ nomunzvimbo ine makomo yeBheteri, chiuru chaiva naJonatani+ kuGibhiya+ raBhenjamini, uye vamwe vanhu vose akavarega vachienda, mumwe nomumwe kutende rake. 3 Jonatani akabva auraya boka revarwi+ revaFiristiya+ rakanga riri muGebha;+ vaFiristiya vakazvinzwa. Asi Sauro akaita kuti hwamanda iridzwe+ munyika yose, achiti: “VaHebheru ngavanzwe!” 4 VaIsraeri vose vakanzwa zvichinzi: “Sauro auraya boka revarwi revaFiristiya, zvino vaIsraeri vava kuvengwa kwazvo+ nevaFiristiya.” Naizvozvo vanhu vakaunganidzwa kuti vatevere Sauro kuGirigari.+ 5 Zvino vaFiristiya vakaungana kuti varwe nevaIsraeri, ngoro dzehondo+ zviuru makumi matatu nevatasvi vemabhiza zviuru zvitanhatu nevanhu vakawanda sejecha riri pamhenderekedzo yegungwa;+ vakaenda vakatanga kudzika musasa muMikmashi kumabvazuva kweBheti-avheni.+ 6 Varume vaIsraeri vakaona kuti vakanga vachitambudzika kwazvo,+ nokuti vanhu vakanga vamanikidzwa kwazvo; uye vanhu vakavanda mumapako+ nomumakomba nomumabwe nomuninga nomumakomba emvura. 7 VaHebheru vakatoyambuka rwizi rwaJodhani+ vachienda kunyika yaGadhi+ neyaGiriyedhi. Asi Sauro akanga achiri muGirigari, uye vanhu vose vaidedera pavaimutevera.+ 8 Akaramba achimirira kwemazuva manomwe kusvikira nguva yakatarwa yakanga yataurwa naSamueri;+ asi Samueri haana kusvika kuGirigari, uye vanhu vakanga vachipararira vachimusiya. 9 Sauro akazoti: “Ndiunzirei chibayiro chinopiswa nezvibayiro zvokugoverana pedyo.” Naizvozvo akapa chibayiro chinopiswa.+ 10 Paakangopedza kupa chibayiro chinopiswa, Samueri akabva asvika. Naizvozvo Sauro akabuda kuti amuchingure uye amukwazise.+ 11 Samueri akabva ati: “Waitei?”+ Sauro akati: “Ndaona kuti vanhu vanga vapararira vachindisiya,+ uye imi—hamuna kuuya mumazuva akatarwa,+ uye vaFiristiya vanga vachiungana kuMikmashi,+ 12 naizvozvo ndati,+ ‘Zvino vaFiristiya vachauya kuzorwa neni kuGirigari, uye handisati ndakumbira kunzwirwa nyasha naJehovha.’ Naizvozvo ndazvigombedzera+ ndikapa chibayiro chinopiswa.” 13 Samueri akabva ati kuna Sauro: “Waita zvoupenzi.+ Hauna kuchengeta murayiro+ waJehovha Mwari wako waakakurayira,+ nokuti, kudai wanga wadaro, Jehovha aizosimbisa umambo hwako pavaIsraeri nokusingagumi. 14 Zvino umambo hwako hahuzogari.+ Jehovha achazvitsvakira munhu anodiwa nomwoyo wake;+ uye Jehovha achamurayira kuti ave mutungamiriri+ wevanhu vake, nokuti iwe hauna kuchengeta zvawakarayirwa naJehovha.”+ 15 Samueri akabva asimuka, akaenda kuGibhiya raBhenjamini achibva kuGirigari, uye Sauro akaverenga vanhu, vaakanga achinavo, varume vanenge mazana matanhatu.+ 16 Sauro nomwanakomana wake Jonatani nevanhu vaakanga achinavo vakanga vachigara muGebha+ raBhenjamini. Asi vaFiristiya vakanga vadzika musasa muMikmashi.+ 17 Uto revapambi raibuda richibva kumusasa wevaFiristiya rakaita mapoka matatu.+ Rimwe boka raitsaukira kumugwagwa wokuOfra,+ kunyika yeShuari, 18 rimwe boka raitsaukira kumugwagwa wokuBheti-horoni,+ uye boka rechitatu raitsaukira kumugwagwa wokumuganhu wakatarira kumupata weZebhoimu, nechokurenje. 19 Zvino munyika yose yaIsraeri makanga musina kana mupfuri, nokuti vaFiristiya vakanga vati: “Kuitira kuti vaHebheru vasagadzira bakatwa kana kuti pfumo.”+ 20 VaIsraeri vose vaienda kuvaFiristiya kuti mumwe nomumwe anorodzerwa muromo wegejo rake kana kuti bhidha rake kana kuti demo rake kana kuti jeko rake.+ 21 Kurodza miromo yemagejo nemabhidha nezvishandiso zvine zvokubayisa zvitatu nematemo uye kusunga zvakasimba zvokubayisa nzombe+ kwaiita pimu. 22 Pazuva rokurwa hapana bakatwa+ kana pfumo raiva muruoko rwomunhu chero upi zvake pavanhu vakanga vaina Sauro naJonatani; asi Sauro+ nomwanakomana wake Jonatani ndivo vaiva nazvo. 23 Zvino boka revarwi vanorinda+ vevaFiristiya raibuda roenda kumupata wokuMikmashi.+
^ 1Sa 13:1 Nhamba yacho haimo mumashoko echiHebheru epakutanga.